South Sudan | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: June 6, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Ma mma ndị Sudan dị mma n'anya. Beautyma mma ndi Sudan mara mma n’enweghi ihe n’agha. Mma ndi Sudan bu oji Black / nke ndi Africa n’iile.	GỤKWUO
Hapi, nuru osimiri Nail ka osimiri di omimi nke di oke nma site na onodu aku na uba ya, nke ndi otu ya na mmepe ya "O mere oru ma kewaa oru di nkpa na Egypt oge ochie"
Site na: KongoLisolona: June 5, 2020 03: 03 Enweghị asịsa
Ide mmiri a na-eme kwa afọ na-agbakọta na ndagwurugwu Naịl, si otú a na-eme ka a na-enwe ọganihu ọrụ ugbo n'ihe karịrị mba 10 Africa. Osimiri a dị nsọ na nke ụwa…	GỤKWUO
Ihe ndị Katangese kewapụrụ iche na-amataghị: na June 30, 1960, ndị Belgium (taa Democratic Republic of the Congo) nwetara nnwere onwe, mana naanị ụbọchị 11 ka nke ahụ gasịrị, nke ahụ bụ ikwu na July 11, 1960 , Katanga nke bara ọgaranya, kpọkwara nnwere onwe ya n'okpuru Moïse Tshombe na Blessing nke Belgium, nke ghọtara Republic of Katanga ọhụrụ ozugbo.
Site na: KongoLisolona: Mee 11, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Kemgbe ahụ, ndị Katangese akwụsịbeghị ịkwalite usoro nnwere onwe. Nnwere onwe Katanga si Kongo dị n'isi okwu ndị Katangese niile…	GỤKWUO
Akụkụ niile nke ndụ ọdịbendị nke "Black" Africa na-ezo aka Egypt ma ọ bụ enweghị nnabata nke na-egbochi ịghọta.
Site na: KongoLisolona: April 30, 2020 12: 44 Enweghị asịsa
Mana, Sudan nwere Pyramid karịa Egypt - eziokwu maka ndị Black / Africa na-amalite isi na oghere ebe ndị Western nọ na-eli ya. C ...	GỤKWUO
Israel: "huntchụ nta maka ndị isi ojii / ndị Africa" ​​Alaka ndị Juu na-achọghị mgbanwe nke ndị Israel na-eleda ndị isi ojii / ndị Africa si mba ọzọ anya "rimkpa oke, ngosipụta agbụrụ, ma ọ bụ oburu igba nwanyị, ndị isi ojii / ndị Africa bụ ndị ji ime ihe ike". Na -eche Apartkpa oke na Obi nke Steeti Juu
Site na: KongoLisolona: Ọktoba 28, 2019 00: 00 Enweghị asịsa
Mgbe ichu nta nke ndi Palestine, Israel busoro ndi ojii / ndi Africa agha. A na - akpọ ha aha "ndị na - etinyeghị aka". Ogige ndị dị na Ketziot n'ọzara nwere ndị gbara ọsọ ndụ 11 000. Mgbidi nchekwa ...	GỤKWUO
Matriarchy Nubian: nwa Queens nke Kush na-asọpụta n'ihu Alaeze Ukwu Rom "oké mmepeanya nke Meroe na n'ebe ndịda nke Ijipt, akp ndịda nke cataract nke Naịl na Nubia (Sudan) si BC na -300 ruo mgbe 2e narị afọ AD, e nwere ọtụtụ ndị inyom ndú, dị ka e kweere na ọ dịghị nwoke isi na niile "
Site na: KongoLisolona: April 19, 2019 02: 13 Enweghị asịsa
Ọchịchị uku nke atọ bụ nke Queen Bartare 284 na 275 tupu oge anyị, bụ nke a chọtara ili ya yiri pyramid: Alaeze Kush bụ aha ndị Ijipt ...	GỤKWUO
Aug08 10: 26
iru mmiri 69%
Nwere obere urukpuru
Hi / le: 32/26 ℃
iru mmiri: 43
Hi / le: 31/26 ℃
iru mmiri: 48
Hi / le: 27/24 ℃
iru mmiri: 70